Zavakanto & Kolontsaina · Marsa, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Marsa, 2008
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Marsa, 2008
Isiraely: Fankalazana ampifaliana ny Porima
Israely 30 Marsa 2008
Ny fetin’ny ny Porima no fankalazana ny fandresen’ny vahoaka Jiosy ireo izay mitady ny fahapotehiny. Ankalazaina amin’ny alalan’ny fomba fiakanjo, firavoravoana, sakafo matsiro, ary fisotroana be ny fetin’ny Porima. Manala azy mandritra ny Porima– Hoy i Hannah ao amin’ny Israelity: Nitombo ny fitiavako ny Porima. Ity angamba ny fety ankafiziko...
Rosìa : Honohono sy zava-misy
Da Russophile [voasarik'izay rehetra mikasika an'i Rosìa] dia mamaly ny lahatsoratr'i La Russophobe [tafintohin'izay rehetra mikasika an'i Rosìa] amin'ireo Honohono 10 mikasika an'i Rosia : 2. MYTH: Putin has abused human rights, personally murdered 200 journalists and returned Russia to its totalitarian past. REALITY: Too bad that only 3% of...
Karaiba 25 Marsa 2008
Iràna 22 Marsa 2008
Omaly no andro voalohany amin'ny lohataona sy andro voalohan'ny taona iraniana. Ny fetin'ny Nowruz na koa Norouz dia ankalazaina any Iran sy firenena maro tahaka an'i Tajikistan sy Afghanistan. Mpiblaogy maro no nankalaza izany fety izany, koa dia nifampirary soa sy nifanakalo hevitra izy ireo tamin'izany andro izany. Ny sasany...
Angletera 21 Marsa 2008
Etiopia 20 Marsa 2008
Frantsa 20 Marsa 2008
Armenia 19 Marsa 2008
Nanoratra ny heviny momba ny taratasy misokatra nosoratan'olomalaza dimy any amin'ny taranjan-kolontsaina manavanana azy avy ka voasoratra ao ny toe-draharaha politika any Armenia i Unzipped. The signatories Nanolo-kevitra ny hisiana fifidianana solombavambahoaka vaovao indray ireo mpanao sonia hamahana ny olana nateraky ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny 19 Febroary lasa teo ka...
Karaiba 14 Marsa 2008